Wordle စီးပွားရေးကတ်ပြားတစ်ခု! | Martech Zone
Wordle ထိုး အ blogosphereaလင်မယား ရက်သတ္တပတ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှင့် ဘလော့ဂါများ အသံတွေ Wordle သည်သင်၏ Java ကိုပြောင်းလဲစေသော Java application တစ်ခုဖြစ်သည် Cloud Cloud အလှတရား၏အရာသို့။
ငါစဉ်းစားမိတယ် Wordle အေးဆေးပေမယ့်သေချာပေါက် blogworthy မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေ့ငါတိုင်ပင်ပြီး Sharpminds။ session ထဲမှာရှေးရှေးတစ် ဦး, Linda Watts, သူမ၏ကဒ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင့်ချက်ချင်းငါ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုတင်!
Linda တွင်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံး (အပြင်အခြားထူးခြားသောဒီဇိုင်းများ) တစ်ခုစီရှိသည်။ တစ်ခုစီသည်မတူညီသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများကိုအဓိကထားပြီးကျောဘက်တွင်ရှိသောသူမ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်အတူ! အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖန်တီးမှုပါတကား! အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Wordle ယောက်ျားများဖြစ်လျှင် Linda ကိုငှားပြီးစီးပွားရေးကဒ်ဌာနကိုကြီးကြပ်ရမည်။
Linda သည်လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်က Webmaster တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖန်တီးမှု၊ ငါသူမကို geek ဖြစ်ရတာကိုနောက်ပြောင်ခဲ့တယ်
ငါဆုံးမloveဝါဒပေးရတာကိုကြိုက်တယ် BitWise Solutions Sharpminds ဖြစ်ရပ်များ၊ ငါတက်ရောက်ခဲ့သူအားလုံးဆီကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့ပြီးငါသင်ကြားတာထက်ပိုပြီးသင်ယူခဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။
Linda သည် Web, Web 2.0 နှင့် Print Technology Coach ကဲ့သို့သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသစ်ကိုမျှော်လင့်နေသည်။ သငျသညျသူမ၏အချို့မူရင်းအတွေးအခေါ်များအတွက်ဖုန်းခေါ်ပေးချင်ပေမည်! ငါပြောသောအခါဤအယူအဆကိုစဉ်းစားမိစေချင်သည် စီးပွားရေးကဒ်ပြားကိုရွေးချယ်ခြင်း ဒီအပတ်! Linda သည်အချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်မသေချာပါ။ သင်၌အောင်မြင်သောဝက်ဘ်ဈေးကွက်ရှင်တစ် ဦး အတွက်အခွင့်အရေးရှိမရှိသင်မေးသင့်သည်။
Tags: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်tag ကိုCloud Cloudtags များ
31:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 13
ဒီ Doug အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းရဲ့မူရင်းတွစ်တာကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်။ ပြန်လည်တင်ပို့ခဲ့သည် ငါခဏအကြာမှာ Wordle နဲ့အတူကစားခဲ့ပြီးအလုပ်မှာငါ့နံရံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မတူညီတဲ့တိမ်တိုက် ၃ ခုပေါ်လာတယ်။
ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ - စကားလုံးများ၏စွမ်းအားကိုပုံအခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲသည်။
ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်တန်သော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်၏နေရာသေးသေးလေးတွင်သင်ပြောနိုင်သည်ထက်စကားလုံးတိမ်တိုက်သည် ပို၍ တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
သြဂုတ် 1, 2008 မှာ 7: 46 AM
သြဂုတ် 1, 2008 မှာ 8: 51 AM
မနေ့ကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့အမြဲတမ်းကဒ်ပြားကကျွန်တော့်စာတိုက်ပုံးထဲမှာစောင့်နေတယ်။ နမူနာတစ်ခုပို့မယ်။ Moo Printing အရည်အသွေးကိုမင်းသဘောကျမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
သြဂုတ် 1, 2008 မှာ 9: 12 AM
ထိုအခါငါမနေ့က session ကိုခံစားဘယ်လောက် add ပါလိမ့်မယ်။ မင်းကငါ့ကိုဘလော့ဂ်တွေအတွက်အသုံးပြုမှုကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားမိအောင်သင်ပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်ငါကတခုခုလုပ်မယ်။
သြဂုတ် 1, 2008 မှာ 9: 36 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Linda! ဒါဟာတက်ရောက်သူများစွာသောရှေးရှေးအုပ်စုတစ်စု - အမြဲတမ်းလွယ်ကူစေသည်။
1:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 09
Wordle ကိုသင်ချစ်ရမယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကကျွန်ုပ်၏“ business card” အရင်းအမြစ် site အတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါအရောင်အစီအစဉ်ကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်တယ်။ Wordle ကျောက်ဆောင်။ မင်းဒီမှာတွေ့နိုင်တယ် http://cardsfreebusiness.com/
1:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 18
1:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 38
wow ဘယ်လောက်အေးတယ် !!! Iam အရမ်းသဘောကျတယ်